Xildhibaano badan oo mooshin xil ka qaadis ka keenay guddoomiye baarlamaan oo fasax u kala diray – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xildhibaano badan oo mooshin xil ka qaadis ka keenay guddoomiye baarlamaan oo fasax u kala diray
Waxaa saacadihii ugu dambeysay xaalad cakirnaan ah ka dhex jirtay baarlamaanka maamulka Galmudug, kadib markii uu khilaaf aad u weyn ka dhex curtay guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi.
Kulan ay xarunta madaxtooyada ee magaalada Cadaado ku yeelan lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa la sheegayaa inuu ishor-taag ku sameeyay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi.
Kulankaasi ayaa la sheegayaa inuu ahaa mid ay xildhibaanada Galmudug uga hadli lahaayeen mooshin xil ka qaadis ah oo ku doonayaan inay xilka uga qaadaan guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir.
Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa war-qoraal ah uu soo saaray ku sheegay in kalfadhiga 4-aad ee xildhibaanada Galmudug oo lagu waday inuu maanta furmo, dib loo dhigay muddo 45 cisho ah.
Wuxuu guddoomiye Gacal dib u dhacaasi ku sheegay inay tahay abaaraha adag ee haatan ka jira deegaanada maamulka Galmudug iyo sidoo kale iyo xaaladda kala guurka ah ee ka jira guud ahaan dalka Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa haatan doonaya in guddoomiyaha baarlamaankaasi Cali Gacal Casir uu xilka banneeyo, iyagoona guddoomiyaha ku eedeyay arrimo ay ka mid yihiin xil gudasho la’aan iyo wax is-daba marin.